Author: Tom Zulkinos
Skip to main content. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta soomaaliy qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Maxkamadda milateriga ayaa weli qaada kiisas ka baxsan awoodeeda sharci, oo ay ka mid yihiin dembiyada la xiriira argagixisada, iyo kiisas loo haysto dad rayid ah, taasoo khilaafsan sharciga caalamiga ah iyo dastuurka kumeelgaarka dastuurkx ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo caddaalada waa in ay qaadaan tallaabooyinkan mudada dhexe ah. Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka soomaaliyx uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda eee ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Ras waa eray Amxaari ah oo u dhigma Madaxa, Tafari-na waa naaneys loo yaqaanay Xeyle Salaasi wixi ka horeeyay xiligii uu boqortooyada koray. Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii cysub jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka.
Ayadoo qeyb ka ah dib u habaynta lagu samaynayo laamaha sirdoonka iyo booliska, waa in dowladda, si gaar ahna wasaaradda amniga gudaha ay mudada dhexe u:. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1. Dastuurka Soomaaliya kii sastuurka, Qod. Dhagaysiga dacwadaha ee maxkamadaasi ayaan gaarsiisneyn heerka caalamiga ah ee maxkamadeynta caddaalada ah, gaar ahaan in si buuxda loo helo qareen difaac iyo maxkamadeyn degdeg ah.
Macnaha erayga Rastafari Ras iyo Fastuurka. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka. Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Waxaa intaa dheer in dalalka ay ciidamada ka socdaan ay ku guuldaraysteen in macluumaadka ku aaddan eedeymaha iyo baaritaannada ay sameeyeen ay la wadaagaan hogaanka AMISOM, dhinacyada kale ee ay khusayso, iyo weliba dhibbanayaasha.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Gudiga noocaasi ah meesha kama uu saari karo hannaanka gudaha kala socoshada laamaha ammaanka, garsoorka madaxa bannaan, ama hannaanka caddaalada tayada leh. Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1.
Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista ccusub cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka.
Tusaale ahaan, bishii Maarsobooliska qaranka, ciidanka NISA iyo booliska dowladda hoose ee caasimadda, ayaa muddo 24 saac ah si xoog ah xusub raray 21, oo qof oo ah dadka gudaha dalka kasoo barakacay, kuwaasoo ku noolaa xeryo aan rasmi ahayn oo ku yaalla Muqdisho. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan NISA iyo ciidanka booliska, ayaa adeegsaday qaabab kala duwan si ay weriyayaasha ugu qasbaan in ay arimaha jira uga warramaan sida ay dowladda rabto.
You are here Home. Dacwad oogayaasha ayaan xoogga saarin in dhalinyaradaasi lagu qaado dacwad dembiyeed waafaqsan xeerka uu maamulkaasi dhawaan ansixiyaya ee ciqaabta dembiyada galmada.
Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu soomaalyia Abril. Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah.
Waa hagaag, Ilaahey wuxu noqday Madoow, xaqiiq, xaqiiq” waa hadalkii bob marley. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu soomaaliy qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista.
NISA ayaa si aan kala sooc lahayn u xirtay weriyayaal iyo dad siyaasadda u dhaqdhaqaaqa, taasoo u muuqata in ay siyaasadi ka dambeyso.
Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan la-imaatinka jadwal ku dastuurka cusub. Qorshayaasha hadda socda ee ku aaddan qaab-dhismeedka ammaanka qaran ee Soomaaliya ayaa iska sooomaaliya tiray laamaha sirdoonka. Hannaanka siyaasadeed ayaa waxaa gacanta ku haya ragga, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya hogaamiyayaasha beelaha.
Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh. Waa in gun-dhig looga dhigaa dib u habaynta ammaanka Soomaaliya ee hadda laga doodayo helitaanka isla xisaabtan, gaar ahaan samaynta hannaan xaqiijin iyo dusha kala socosho ah si dastuyrka looga saaro taliyayaasha iyo askarta tacaddiyada geysta, kuwa cusub iyo kuwa hadda joogaba, iyo weliba in la xoojiyaa goobaha qaran iyo kuwa caalamiga ah ee ay dhibbanayaasha xaqooda ka heli karaan.
Tan iyo bishii Novemberugu yaraan 60, oo qof ayaa xoog looga raray xeryahooda. Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah. Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore ay gacanta ku hayeen.
Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. By your continued use of this site you accept such use. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in we December 28, Kiisaska la xiriira ammaanka iyo argagixisada ee ay baarto NISA ayaa loo gudbiyaa soomaalita. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka.
Soomaalidu horay ugu maahmaahday “Hal booli ahi, nirig xalaal dastuirka ma dhasho” Hadaba yaa dhalay dastuurka qabyo-qoraalka ah? Carruurta askarta ah ee la qabto waa in hubka laga dhiggaa, oo la siiyaa gargaarka ku haboon ee ay u baahan yihiin si ay jir iyo maskax ahaan ugu soo kabtaan ayna bulshada uga mid noqdaan.